I siseko sekhonkco
Ekuqaleni, ukukhonkxa kwintambo yaba yinxalenye yobomi bemihla ngemihla kwaye kwabizwa ngokuba yi "Intambo." Izambatho ezibophekile, zazihlotshiswe ngeebhola, i-pillowcases, iebhatyi, iifowuni, iifowuni, ithawula kunye nokunye. Kwaye kwaye yahlobisa imveliso yonke - iipendeni, iibhulaphu, i-napkins. Babecala kakhulu behlanjwe kwilinen kunye nekotoni ngentambo. Umatshini awukwazi ukukhwela. Apha, into nganye iyingqayizivele kwaye iyenziwa ngokuthatha inxaxheba kwindalo kunye nezandla ezifudumeleyo.
IziNcinci ezincinane zokuHlanganisa
Ngoxa uncedo lokubamba unokwazi ukubonisa indlela ovakalelwa ngayo, ubuntu kunye nokubalekela kwimifanekiso eqhelekileyo kwi-suit. Ukongezelela, iimveliso ezikhonjiweyo ebhedini yendlela ehamba phambili yindlela efanelekileyo kakhulu kwaye uyihlobise ikhabethe yakho yexesha elide.
Ezi ziseko ziya kukunceda emsebenzini wakho
Ukusebenza kunye nekhonkco, kufuneka uqaphele "ukubhala ngesandla", ukuphakama kwamakholomu kunye ne-crochet akumele kube yincinci kwaye ayinkulu kakhulu. Kuxhomekeka kwindlela osebenza ngayo intambo iza kwandiswa kwi-1st reset yeetops. Kuya kwiindawo eziphakamileyo zamakholomu akazange aphendule, kufuneka ubenze i-loop yokusebenza kwinqanawa kunye nomnwe ophakathi kwesandla sakho sokunene, kwaye ubambe iqhosha ngeminwe emi-2-index kunye enkulu. I-loop yokusebenza kufuneka ikhutshwe ngexesha lokusetha kwakhona.
Xa udibanisa inxalenye, kufuneka unyamekele ukuba imida ayidluli kunye. Kufuneka udibanise ukhenketho ngamanqanaba amabini ngaphezu kwekhonkco ekhethiweyo ukuba usebenze. Ukuphakama kwikholam ekupheleni kunye nenani lokuphakamisa i-loops kufuneka lilingane nokuphakama kwebhanki ekuboshwe. Ukuphakama kwekholomu ngaphandle kwekhonkco kwiipateni ezilula kufana nelinye linye lomoya, kwaye ukuphakama kwesibhubhe esisigxina kufana no-2 loops. Emva koko ukulungiswa kwakhona kweedonti kufaka kwi-1st loop air. Ngokuthumela imivalo "ukusuka ngaphantsi kwe-arch", "emsebenzini", "ngaphambi komsebenzi", "raskosl", ukuphakama komgca kuyancipha kwaye ngoko ukuphakama kwamacangci okunciphisa kuncitshiswe. Kwiingxelo zeepateni, i-loops yamanqaku inikezwa "kwimiqulu" yokuphakama okuphakathi. Uzakufuna ukutshintsha kancane umda, oku kufuneka kwenziwe emva kokukhangela umda wesampula esithathiweyo.
Xa utshintshe umbala womgca, ukusetha kwakhona iitshi kwi-bar kufuneka kwenziwe ngocingo lombala ohlukileyo. Shiya intonga yomtya womnye umbala kancinci, uze ulungise kwicala elingalunganga okanye umgca wengubo egqityiweyo. Kungcono ukubandakanyeka. Ngokufanayo, umtya uqhotyoshelweyo okanye uqhotyoshelweyo ukuba ususwe emsebenzini. Xa kuyimfuneko ukukhetha imibala emigqeni, iintambo ezigqithisiweyo zihanjiswe ngaphaya komda wecandelo, zithintana kunye nomsebenzi osebenzayo ukuba i-loop loops ifakwe.
Ukubala ubuninzi bokubamba, isampula yolawulo esilinganisa i-15X15 cm yenziwe, imijikelo isetyenziswe kwi-stockings encinci yeenaliti zokudibanisa kwaye ihlulwe. Beka ecaleni elingafanelekanga ngendwangu ebomvu yelinen, isinyithi ibanjwe ubunzima, ichukumise ngokungathinteki iingubo zamanzi. Kwakhona kufuneka uqhube kwiindawo ezigqityiweyo zemveliso. Ukuba iinxalenye zibophelelwe ngokufanelekileyo, azidingi ukuba izilungiso zilungiswe. Xa kunesidingo salokhu (amaninzi amathanga e-air loops, adibanisa inxalenye, intambo elukhuni, i-distortion encinci yecandelo, njl.), Ngoko umgca weprojekthi usetyenziswe kwinqanawa kunye nemigangatho yalo mveliso ifakwe kuyo.
Iinkcukacha ezichanekileyo zinokudibaniswa ngoncedo lweziphumo zokubala. Imizila ejikeleziweyo yeenkcukacha, imigca yesigxina, umqala, i-pellet ye-sleeve ikulungele ukudibaniswa ngumzekelo wokulawula. Kwiesampuli kunye nesepha esincinci yesepha, umgca ofunwayo wephethini usetyenziswa. Ukongezwa ngokuchazwa ngamatye kunye neenkomfa zekhoyili zombala ochaseneyo. Emva koko umgca kumgca ngamnye uza kubonisa ngokuchanekileyo ubude kunye nenani lamasango okunyuka nokwehla.
Ukugqiba umqala ukuba wenze emngceleni oqingqiweyo, owenziwe ngaphambili. Ukwenza oku, kufuneka ulungise umgca wentamo, usetyenzise kuwo amaxesha amancinci ama-2 kunye neenkomfa zekhoyili zombala ochaseneyo. Emva koko, kunye nobude bentamo, ubophe ikhonkco lomoya ojikelezayo kule kholeji ukudibanisa umqolo omnye wemikholomu ngaphandle kwekhonkethi. Gxotha kwaye uhluthe emaphethelweni entanyeni, uze uyigwebe ngentambo "yentsaliti" phezu kweengqungquthela zesiqhelo zamahhala zekholeji. Susa umtya we-reel. Gweba iteksi ngecala elingalunganga okanye ubuso. Unokuphinda uqhube umda weendawo naziphi na indawo ukuba ufuna ukugqitywa kwakhona. Kwiqendu eligqityiweyo, unako ukutshintshela iilesi zokugqiba.
Ukugqiba ijeketi yee jeans ngezandla zakho
Indlela yokudweba inja, uphawu lwe-2018, kwizigaba, kulula kwaye luhle: iiklasi zokufundisa abantwana
Ubugcisa be-origami ukusuka kumaphepha
Isipho kuwe ngoNyaka woNyaka omtsha: iqhwa leqhwa kwi-polymer yobumba, iklasi yeklasi kunye nesithombe
Iintlobo zeentyatyambo ezivela kwiintyatyambo ezomileyo
Ibhokisi le-Origami ngezandla zakho
Indlela yokuphumelela kwaye uhlale ulindile ngokwenene?
Isondlo esifanelekileyo, zingaphi iikhalori onokuzidla ngosuku?
Isobho se-Bean kunye nemifuno edikiweyo
Yintoni abafazi abangayi kubaxolela ngamadoda?
Indlela yokuthambisa umntwana kwi-dummy
I-baked mackerel kwisitala saseMexico
Yonke intsapho kwiHello entsha ye-boutique yezipho zonyaka omtsha!
Unokumangalisa umhlobo wakhe ngoFebruwari 14
Ziziphi iiblogi kwaye zenziwe njani?
Imenyu yokutya yeKim Protasov
I-Tagliatelle noodle nge-zucchini kunye ne-ham
Ikhekhe le-lemon nge-blueberries
Ukutya kwendoda yokuqala
Zucchini zifakwe ngamakhowe